भित्री झिल्ली कसरी लेख्ने? भित्री झिल्ली के हो यसको अर्थ के हो? Tdk - कसरी लेख्ने।इन्फो
भित्री झिल्ली कसरी लेख्ने
भित्री झिल्ली सही हिज्जे
कसरी लेख्ने साइटको स्थापना गरीएको छ कि व्यक्तिले शब्दहरू सहि उपयोग गर्दछन्। हाम्रो उद्देश्य भनेको शब्दहरूको सही प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्नु र उनीहरूलाई उनीहरूको खराब प्रभावबाट जोगाउनु हो। हाम्रो लेख्ने साइटलाई धन्यवाद, हामी शब्दहरूको सही प्रयोगमा हाम्रो गाइड पाउँछौं र उहाँलाई धन्यवाद, हामी हाम्रो दिमागमा प्रश्न चिन्हहरू हटाउँदछौं। अर्को शब्दमा, हामी सबै मानिसजातिलाई एक शब्द कसरी लेख्ने भनेर जानकारी प्रदान गर्दछौं। हाम्रो साइटको खोजी पट्टीमा खोजी गरेर तपाईं हिचकिचाईएको शब्द पाउन सक्नुहुनेछ र यसको सही हिज्जे सिक्नुहोस्।
हामीले हिज्जे नियमहरूमा ध्यान दिनुपर्ने सब भन्दा महत्त्वपूर्ण समस्याहरू यो हो जुन यो अप टु डेटमा छ। कसरी एक शब्द अप टु डेट हुन सक्छ? हो, केहि समानार्थी शब्दहरूले समयसँगै फरक अर्थ र अर्थ सिर्जना गर्न सक्दछ, त्यसैले हामीले नयाँ शब्दहरू सुन्नु पर्छ र तिनीहरूको सही हिज्जे सिक्नुपर्दछ। पुरानो शब्दहरू साथै नयाँ शब्दहरू हाम्रो भाषामा प्रवेश गर्दैछन्।
भित्री झिल्लीको अर्थ के हो?
भित्री झिल्ली कसरी लेख्ने?
भित्री झिल्ली हिज्जे गाइड
आणविक औषधि, -मेडिसिन
मानव रहित चीज